42 Cronies supporting Burmese Regime – USCB | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
Burmese in Fort Wayne invite Dhamma Talks →
42 Cronies supporting Burmese Regime – USCB
စဉ် လူအမည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဗီဇာပိတ်ဆို့ သြစတြေးလျ အစိုးရမှ
၁ ဦးအောင်ကိုဝင်း (ခ) ဆရာကျောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ်
ကမ္ဘောဇဘောလုံးသင်းပိုင်ရှင် အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၂ ဦးကျော်ဝင်း ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီ မြန်မာအင်တာနေရှင်နယ်သတင်း၊
ရွှေအက်ဖ်အမ်ရေဒီယို အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၃ ဦးမောင်မောင်မြင့် မြန်ဂုဏ်မြင့် ကုမ္ပဏီ (ကြံ့ဖွံ့ ၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ) အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၄ ဦးမောင်ကို ထာဝရ သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီ အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၅ ဦးအောင်ထွေး ရွှေပန်းကုမ္ပဏီ (Golden Flower Company Ltd.) အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၆ ဦးကျော်မြင့် ရွှေပန်းကုမ္ပဏီ (Golden Flower Company Ltd.) အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၇ နေဝင်းထွန်း ပတ္တမြား နဂါး ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Ruby Dragon Jade and Gems Company Ltd.) အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၈ ဦးအိုက်ထွန်း အိုလံပစ် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ၊အာရှဓန ဘဏ် အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၉ ဦးအောင်မြတ် (ခေါ်) ဦးအောင်မြင့် မိခင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ
(Mother Trade and Construction Company) အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၁၀ ဦးဝင်းလွင် ကျော်သာကုမ္ပဏီ၊ ကျော်သာဆောက်လုပ်ရေးအုပ်စု၊ အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၁၁ ဒေါက်တာ စိုင်းစံထွန်း လွိုင်ဟိန်းကုမ္ပဏီ (Alpine သောက်ရေသန့်)
ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၁၂ ဒေါ်စန်းစန်းရီ စူပါဝမ်း ကုမ္ပဏီအုပ်စု
A&S International Co., Ltd. အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၁၃ အောင်ဇော်ရဲမြင့် (ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်၏သား) ရေတံခွန် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၁၄ စစ်တိုင်းအောင် (သစ်တောဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်ဖုန်း ၏သား) Suntac International Trading Co., Ltd. အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၁၅ စစ်သွေးအောင် (သစ်တောဝန်ကြီးဟောင်း ဦးအောင်ဖုန်း ၏သား) Suntac International Trading Co., Ltd. အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၁၆ လွင်မိုး (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်) သတ္တုတွင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် အရေးမယူရ
(စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဟောင်း နှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီအတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်သောင်း၏သား) အောင်ရည်ဖြိုးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
International Group of Entrepreneur (IGE) Co., Ltd. အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၁၈ ဦးပြည်အောင် (ဗိုလ်မှူးဟောင်း)
(ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး၏ သားမက်) အောင်ရည်ဖြိုးကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
Queen Star Computer Company အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၁၉ ဦးဝင်းမြင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊
ရွှေနဂါးမင်းကုမ္ပဏီ၊ ဇေယျာရွှေမြေဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၂၀ အောင်ကျော်မိုး (ခေါ်) အောင်မိုးကျော် International Brewery Trading Company
၂၁ ဦးခင်စိုး အဏ္ဏဝါလွှမ်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရန်ကုန်၊ ပဲခူး ဒေသကြီးများတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် ၁၄ဆိုင် ဖွင့်ထား၊ အရေးမယူရ
၂၂ ထွန်းနိုင်ရွှေ (ခေါ်) ထွန်းထွန်းနိုင် (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏သား) မြန်မာနိုင် အုပ်စု၊ ဂျေ အန် ဂျေ ကုမ္ပဏီ (J and J Company)
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ဒေသကြီးများတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် ၆ ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထား၊ အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
(ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်အောင်၏သား) နီလာရိုးမ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပဲခူး နှင့် ဧရာဝတီ ဒေသကြီးများတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် ၇ ဆိုင်ဖွင့်ထား၊ အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၂၄ အောင်ဇော်နိုင် (ဦးအိုက်ထွန်း ၏သား) အိုလံပစ်ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် အင်ဂျင်နီယာရင်းကုမ္ပဏီ
ငွေဆောင်ကမ်းခြေဟိုတယ် နှင့်အပန်းဖြေစခန်း အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
(ပအို့လက်နက်ချ အောင်ခန်းထီ အုပ်စု၏ စီးပွါးရေးတာဝန်ခံ) ရွှေသံလွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ပဲခူး ဒေသကြီး ၊ မွန်၊ ကရင်ပြည်နယ်များတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် ၁၂ ဆိုင်ဖွင့်ထား၊ အရေးမယူရ
၂၆ ဦးဇော်လေး ရေလုပ်ငန်းနှင့်ပင်လယ်ထွက်ကုန်များ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ရန်ကုန်၊ ပဲခူး ဒေသကြီးများတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင် ၆ ဆိုင်ဖွင့်ထား၊ အရေးမယူရ
၂၇ တိုးနိုင်မန်း (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၏ သား၊ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေ၏ သားမက်) Red Link Company Limited အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၂၈ နေရွှေသွေးအောင် (ခေါ်) ဖိုးလပြည့်
မြေး) အာဏာပိုင်များနှင့် စီးပွါးရေးသမားများအကြား ဆက်သွယ်အကျိုးဆောင်ပေးနေသူ အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၂၉ ဇော်ဝင်းရှိန် (စစ်ဥပဒေချုပ်ဟောင်း နှင့် ယခု သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင် ၏မွေးစားသား) ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီလီမိတက်၊
ဒယ်လ်တာယူနိုက်တက် (Delta United) ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် အရေးမယူရ
၃၀ ဦးလှမောင်ရွှေ မြန်မာငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဌ၊ မြန်မာ အီးဂရက်စ် (Myanmar EGress) ဒုဥက္ကဌ၊ အရေးမယူရ
၃၁ ဦးချစ်ခိုင် ဧဒင် ကုမ္ပဏီအုပ်စု၊
မြန်မာ့ဆန်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၃၂ အောင်စိုးသာ (ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးစိုးသာ၊ ယခု ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီဝင် ၏သား) Myanmar Information and Communications Technology (Myanmar Infotech) အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး
၃၃ ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦး မြန်မာတိုင်း ဂျာနယ်၊ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်၊ သုတစွယ်စုံမဂ္ဂဇင်း အရေးမယူရ
၃၄ ဒေါက်တာနေဝင်းမောင် (ခေါ်) အောင်ထက် ကြော်ညာနှင့်ဈေးဝယ်လမ်းညွှန်
The Voice Journal အရေးမယူရ
၃၅ မြတ်ခိုင် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်၊
(ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ) ဇင်ယော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၊ Envoy Journal အရေးမယူရ
၃၇ ဇော်မင်းအေး (ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေး ၏သား) မိုးဆန်းပန်း မီဒီယာကုမ္ပဏီ၊
Ruby Mart Shopping Mall အရေးယူပြီး အရေးယူပြီး
၃၈ နန်းကလျာဝင်း (ခေါ်) ကလျာ
(ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်၏ သမီး) ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်
ပေါ်ပြူလာ သတင်းဂျာနယ် အရေးမယူရ
၃၉ ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) ရန်ကုန်မီဒီယာအုပ်စု၊
အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာစာပေနှင့်စာနယ ဇင်းအဖွဲ့ အရေးမယူရ
၄၀ သတိုးဟိန်း မြန်မာဩဘာကုမ္ပဏီ အရေးမယူရ
၄၁ ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း (ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ
ရေးဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း၏သား) A.C.E. ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အရေးမယူရ
၄၂ ဦးရန်ဝင်း A 1 ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီ အရေးယူပြီး အရေးမယူရသေး